एप्पलको सिंगापुरमा उच्च प्रभाव ! « Ok Janata Newsportal
एप्पलको सिंगापुरमा उच्च प्रभाव !
काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी एप्पलले सिंगापुरमा आफ्नो प्रभाव प्रचूर रुपमा विस्तार गरिसकेको छ । अघिल्लो हप्ता एप्पलले सिंगापुरमा विश्वकै पहिलो समुद्रमा तैरिएको मनमोहक एप्पल स्टोर सञ्चालन गर्यो ।
सिंगापुरको मेरिना बे स्याण्डस्थित समुद्रमा रहेको पुरानो नाइटक्लब भवनमा एप्पल स्टोर खोलिएको थियो । उक्त स्टोर सिंगापुरमा रहेको एप्पलको तेश्रो एप्पल स्टोर हो । सिंगापुरमा दुनियाकै पहिलो पानीमाथिको एप्पल स्टोर खोलेको एप्पलले सिंगापुर सरकारसँग मिलेर त्यहाँका जनताका लागि निकै गज्जबको अर्को अफर ल्याएको छ ।